समृद्ध र क्षमतामुलुक समाजका लागि महिला अधिकार | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
समृद्ध र क्षमतामुलुक समाजका लागि महिला अधिकार
| 1496 Views | Published Date : 3rd September 2018 |
जिम्मेवारी बढेकै हो, पोस्ट ओहोदामा नभएर के भयो र ! कसैको श्रीमती, बुहारी, काकी, माइजु हुँदै आमा सम्मको पदभार त ग्रहण गरेकै त हो नि तर कसले बुझिदियोस् यो सबै तहमा बढुवा हुँदा कति तहमा आफ्नो चाहनालाई खुम्चाउनु परेको थियो । आफ्नाहरुलाई खुसी दिनको लागि आफ्नो खुसीको त्याग गर्नुपरेको थियो ।
हो महिला भएर जन्म लिएकोमा आफुमा नै गौरवान्वित हुन मन लाग्छ, आफुले गरेको हरेक निर्णयमा गर्व गर्न मन लाग्छ र भित्रै देखि खुसी हुन मन लाग्छ आफनो जीवनमा । आफुले रचेको संसारमा आफै रमाउन मन लाग्दछ । सोँच्दछु एउटी महिलाको आँट र संघर्षमा नै यो सारा संसार अडिएको छ, सायद उसले हिम्मत नगरिदिने हो भने यो संसारको संरचनामा मै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ कि ?
समाजमा नारी वाद, महिला पुरुषबीच समानता, सँगै हिँडने, अघि बढ्ने यावत कुराहरु व्यापक रुपमा चर्चा हुन्छन् तर के सहज छ त यी कुराहरु महिलाको व्यवहारमा लागू गर्न ? यी र यावत परिवेशभित्र एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा छ ? के साच्चै नै एउटा महिलालाई सजिलो भएको नै हो त अहिलेको परिवेशमा, कि समय अझै आईपुगेको छैन । समय र सन्दर्भको कुरा गर्नुपर्दा हामी जतिसुकै परिवर्तनका कुरा गरेपनि हाम्रो समुदायमा भएको पितृसत्तात्मक सोँच हामीमा हावी भएरै आउँछ । जुन परापूर्वककालदेखि नै चलिआएको छ ।
हो समय लाग्नेछ , सदियौ देखि चलिआएको सोँच जादुको छडि घुमाएझै क्षणभरमा नै बिलिन भएर जाने छैन । हामी आशावादी छौ, हाम्रा भावी सन्ततीले परिमार्जित परिभाषा सुन्न पाउनेछन् भनेर तर सुरुवात नै नगरी अपेक्षित परिणामको आशा कसरी गर्ने । तर्सथ विगतका सोँचलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ पालुवा रोप्ने कोशीस गरौ न त । कुनै पनि महिला पुरुषको विरोधी अवश्य पनि होईन होला पितृसत्ताको साटो मातृसत्ता होईन, बराबरीको चाहना हो । पहुँच र नियन्त्रणको समानता नै अहिलेको समयको अपरिहार्यता हो । जहाँ महिला बिना कुनै संकुचन निर्णय लिन सकिरहेको हुनेछन्, चाहे त्यो आफुले पालेको बस्तुभाउमा होस् या आफुले पहिरिएको गरगहनामा होस् । आफ्नो जीवन, बाल बच्चा अनि घरको बारेमा आवश्यक परेको खण्डमा निर्णायक भुमिका निभाउन सकोस । पहुँच र नियन्त्रणमा तालमेल हुनु नै समानताको आभाष हो । जहाँ महिला भएर जन्म लिदा पनि परिवारमा खुसीको माहोल छाओस्, मिठाइ बाडिँयोस । फेरी कुनै पनि बच्चा छोरी भएको कारणले उसको भु्रणमै बाच्ने अधिकार नखोसियोस ।
एउटा पुरुष घरबाट निस्कन्छ दिनभरि काम गरेर कमाएर फर्कन्छ र त उसको कमाईले घर चल्छ । तर हामीले यो किन बुझिरहेका छैनौ कि पैसा खान मिल्दैन, पैसा लाउन मिल्दैन, पैसामा सुत्न मिल्दैन त्यसलाई घरसंसारको दैनिकीमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता महिलामा हुन्छ । बच्चा जन्माउनु, बच्चा तथा घरमा बुढाबुढीको स्याहार गर्नु, खाना बनाउनु, बजार जानु, परिवारको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्नु, सरसफाई ,घरायसी काम आदी समाजले निर्धारण गरिदिएको महिलाले गर्ने काम भित्र पर्छ जसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त हुँदैन तर पनि यसप्रकारको भुमिकाको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । यसप्रकारका पुर्नउत्पादक कार्यहरु जुन व्यक्तिलाई बाँच्नका लागि नगरी नहुने काम हुन । मानिस एक सामाजिक प्राणी हो ।
त्यसैले उसलाई समाज पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । जुन समाजमा निभाउनुपर्ने उत्तरदायित्व पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि महिलाको नै हुन जान्छ । किनकि पुरुष त उत्पादक भुमिकामा नै व्यस्त भैरहेको हुन्छ । यिनै जिम्मेवारीमा बाँधिएका कारण महिला अन्य भुमिकामा नगन्य रुपमा सहभागि भइरहेका छन् ? । यी र यावत कारणहरुले गर्दा महिलालाई समाजमा देखिने गरी स्थापित हुन अति नै अफ्ठ्यारो छ । जतिनै समानताको कुरो भएपनि सम्र्पुण भुमिकालाई वहन गर्दै पुरुष सँग हातेमालो गर्दै यो समाजमा अघि बढन् महिलालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ । सायद यिनै भुमिका निभाउने व्यस्तताका कारणले गर्दा होला महिला सधै उत्तरबिहीन भएर बसिरहेका हुन्छन् । मान्छे भएर पनि महिलाहरुले के गर्दैछन्, उसको अस्तित्व कहाँ छ, के मा छ भन्ने कुराको हेक्का समेत महिलामा छैन ।
एउटा घरमा, समाजमा, राष्ट्रमा मात्र नभएर पुरा विश्वलाई नै महिला बिना कल्पना गर्दा पनि औचित्यहीन हुन्छ । एउटा महिलाको प्रगति भनेको उसको मात्र नभएर घर, परिवार तथा समाजको प्रगति हो । अतः यस तथ्यलाई महिला स्वम्ले आत्मसात गर्दै रुढिवादी परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै सकारात्मक सोँचको विकास गरेर नै महिलाको प्रगति सम्भव हुनेछ जुन कुरा अपरिहार्य रहेको छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरुमा गरिने भेदभावपूर्ण वातावरण पहिलेको तुलनामा सुधार आएको त छ तर पूर्णरुपमा हटिसकेको छैन । महिलाले अवको परिवषमा परिस्थितिलाई दोष दिनुभन्दा कसरी कुन बाटो पहिल्याएर आफ्ना प्रगतिपथतिर लम्किने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने दखिन्छ । अरुप्रतिको रिस, गुनासोलाई कम गर्दै आफुमा भएको अभाव, अज्ञानता आलस्यता, अशिक्षालाई चिर्दै घर, समाज, देशमा नै परिवर्तनको झिल्को बाल्नका लागि योजना बनाएर चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसैले अवको पाटो भनेको विकास एवं परिवर्तित समाजको परिकल्पना गर्दै सोँचलाई सकारात्मक बनाउने हो । किनकि सकारात्मक सोँचले नै महिलालाई उर्जा प्रदान गर्दछ र सकारात्मक साँेच नै महिलाहरुको प्रगतिको आधार बन्न सक्छ ।
महिला र पुरुषको आफ्नै आर्कषण र अस्तित्वले संसार सुन्दर एवं आर्कषक भएको छ । अतः सोँच बदलौ , बदलिदो समाज सँग आफुलाई पनि बदल्ने कोसिस ग¥यौ भने मात्र सुन्दर र सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ, समतामुलक घर, समता मुलक समाज बन्छ ।